दाहालको सुरक्षामा ५९ जना सुरक्षाकर्मी खटिए ! सुरक्षा थ्रेट बढेकै हो त ? – Gorkhali Voice
दाहालको सुरक्षामा ५९ जना सुरक्षाकर्मी खटिए ! सुरक्षा थ्रेट बढेकै हो त ?
२०७५, २ चैत्र शनिबार ०७:१८
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालमाथिको सुरक्षा थ्रेटलाई लिएर चर्चा सुरु भएको छ । आफूलाई नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको समूहले मार्न खोजेको बताएपछि उनीमाथि सुरक्षा थ्रेट बढेको हो । आफूलाई मारेर समस्या समाधान नहुने धारणा दाहालले बिहीबार एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका थिए । के दाहाललाई सुरक्षा थ्रेट बढेकै हो त ।
प्रचण्डकाे सुरक्षामा नेपाल प्रहरीका एक डिएसपीको नेतृत्वमा २९ र डिएसपीकै नेतृत्वमा ३० जना गरी ५९ जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।‘अरु पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु कसैलाई पनि यो तहको सुरक्षा थ्रेट छैन। दाहाललाई थ्रेट भएरै ५९ जनाको सुरक्षा दस्ता खटाइएको हो,’ श्रोतले भन्यो।